घर मा बाइसेप कसरी निर्माण गर्ने?
मान्छे - आफ्नो छोटो जीवन भर यस हाइट्स वा गतिविधिको कि क्षेत्र हासिल गर्न खोज्ने एक जा। हामी प्रतिष्ठित विद्यालय गर्न आफ्ना छोराछोरीलाई व्यवस्था गर्न छिमेकीको घरमा भन्दा राम्रो कार किन्न, मरम्मत हरेक वर्ष के गर्छन, र त्यसपछि देश को सबै भन्दा राम्रो विश्वविद्यालय मा। यस्तो मानिसको प्रकृति हो। प्रतिबद्धता - सफलता प्रमुख। यो कुराकानी को बिल्कुल सबै विषयहरू लागू हुन्छ।
अब तिनीहरूले युवाहरूलाई पूर्ण खेल गर्न indifferent भन्छन्। हाम्रो कम्प्युटर को को पाठ्यक्रम, प्रगति अनुमति दिएको छ बच्चाहरु इन्टरनेट को असीम expanses वरिपरि भटक धेरै समय खर्च गर्न संलग्न प्राप्त गर्न। तर, खेल भएको छ र कुनै पनि समय सान्दर्भिक हुनेछ। आखिर, सुन्दर शरीर - हरेक मानिसको सपना।
मान्छे जिमहरू, trainers, स्विमिंग पूल मा पैसा धेरै फेंक। सबै - उत्कृष्ट शारीरिक आकार लागि। माथिको तरिका - हरेक नागरिक नहीं उठयो एउटा महंगा खुशी। साधारणतया हामी धेरै तिनीहरूले पर्याप्त समय छैन किनभने जिमहरू जाने छैन। काम, घर, परिवार, आदि तर, संलग्न र आफ्नो शरीर सुधार गर्ने इच्छा छ। यस मामला मा, तपाईं घरमा प्रशिक्षण सुरु गर्न छ।
सबै को पहिलो आफ्नो हात ध्यान। मानसिक गतिविधि संग सम्बन्धित छन् जो सबै भन्दा मान्छे, विशाल बाइसेप छैन (हात मांसपेशी, पूर्ण प्रकाश पारिएको छ जो)। आजकल, त्यहाँ मांसपेशिहरु को तीव्र वृद्धि भएको छ, जो संग स्टेरयड सहित धेरै लागूपदार्थ, छन्। तर, यो छैन व्यायाम सुरु गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो। घरमा बाइसेप उभडा रसायन बिना सम्भव छ। यसो गर्न तपाईंलाई धैर्य र समर्पण आवश्यक हुनेछ।
त्यसैले, क्रममा आफ्नो बाइसेप पंप गर्न रड - घर मा, यो आवश्यक आधारभूत खोल प्राप्त छ। यो टिकट संग अभ्यास गर्ने बाइसेप विकास गर्न मद्दत गर्नेछ को काँध को मांसपेशिहरु र आफ्नो हात आकर्षक फारम दिनुहोस्। कुनै पनि खेल सामान स्टोर मा हुन सक्छ एक projectile किन्न। दुर्भाग्यवश, "फलाम" को मूल्यहरु अब सभ्य। तपाईं पैसा बचत गर्न चाहनुहुन्छ भने, अनलाइन नीलामी इच्छित कुरा हेर्न। म संलग्न मित्र छ भारोत्तोलन? पक्कै पनि तिनीहरू barbells र dumbbells हुनेछ। एक समय को लागि उधारो गर्न अनुरोध। अधिकतम प्रभाव लागि, तपाईं मात्र पट्टी, तर dumbbells, जो हात को आकार समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ आवश्यक हुनेछ। तपाईं सबै आवश्यक उपकरण छ भने, तपाईँले सीधा प्रशिक्षण गर्न अगाडि बढ्न सक्छ। घरमा विशाल बाइसेप - एक वास्तविकता।
को बाइसेप विकास हुन्छ भनी आधारभूत व्यायाम, barbells स्थितिमा उठाने छलफल। नियमित प्रदर्शन वृद्धि मा अवलोकन गर्ने बाइसेप को मात्रा। तपाईं बाइसेप जोड हुनेछ तीन अभ्यास को एक न्यूनतम समावेश गर्नुपर्छ भनेर प्रशिक्षण सम्झना छ। उठाने लागि फलाम को दंड कुनै पनि अतिरिक्त उपकरण आवश्यक छैन खडा। हामी 8-10 प्रतिनिधि को 3-4 सेट गर्छन्। प्रत्येक दृष्टिकोण मा वजन काम वजन बढ्छ। कि पछि, तपाईं सामान्य पीठ आवश्यक हुनेछ। हामी, बस्नुभयो नितम्ब आफ्नो कुहिनो हात झुकाव, व्यापक सेट खुट्टा, हात मा एक डम्बबेलनेबुला लिन र अप बनाउन। तसर्थ, यस बाइसेप घरमा "बन्द समाप्त"। सेट बीच बाँकी 1-2 मिनेट भन्दा बढी हुँदैन। एक फलाम को दंड वा dumbbells संग काम गर्न, नाटकीय वजन उठाउनु आवश्यक छैन। सबै jerks बिना सजिलै गर्छन्। यो बाइसेप धेरै सकेसम्म लोड हुनेछ। बल्ल दर्पण बन्न, दुवै हातमा एक डम्बबेलनेबुला लिन र एकांतर supination संग अप संचालन। तीन अभ्यास बनाउने, तपाईं एक अविश्वसनीय थकान अनुभव हुनेछ। अर्को दिन शुरू भएको मांसपेशी soreness ढिलाइ हुनेछ। यो मुख्य विशेषता हो मांसपेशी वृद्धि।
barbells र dumbbells प्रयोग गरेर तपाईं आफ्नो बाइसेप घरमा महंगा जिमहरू जाँदै बिना पंप गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले केही व्यक्तिगत प्रशिक्षक बिना हुन्छ भनेर भन्न सक्छ। यो एकदम साँचो छैन। आजकल, इन्टरनेटमा जा रहेको छ, तपाईं कुनै पनि जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। महत्वपूर्ण कुरा, धैर्य र लगनशील भई लागिरहेमा छ। नियमित व्यायाम, तपाईं बाइसेप आकार बिस्तारै बढ्ने पाउनुहुनेछ।
महिला - अभ्यास गर्ने pectoral मांसपेशीमा वृद्धि गर्न
सबै भन्दा राम्रो gainer: को संरचना मा आवश्यकताहरु, प्रयोगको लागि सिफारिसहरू र अन्य additives संग संयुक्त
कारबाट कार "कसरी प्रकाश" गर्ने? कसरी इंजेक्शन कार "प्रकाश" गर्ने?
त्यो एउटा फाइल दोस्रो साना समूहमा हिँड्छ समावेश?
कसरी स्टूडियो मा कार्टून के?